I-Woodland Cabin w/ Igceke Elibiyelwe Elingemuva, Umpheme, Umpheme ongaphambili kanye ne-WiFi - Izinja Siyakwamukela
I-Backcountry Bungalow iyindawo enhle yokubalekela ezothando noma yokubalekela umndeni wakho omncane. Ingaphakathi elihle likaphayini we-knotty knotty likubuyisela emuva ngesikhathi, likunikeza umuzwa omnandi, we-rustic, we-cabin-in-the-woods.
Nethezeka futhi uphumule ngezihlalo eziningi zegumbi lokuhlala kanye netafula lokudlela elihlala phambi komnyango wengilazi oslayidayo owenza uhlaka lwegceke lakho elibiyelwe. Kuleso sikhala sangaphandle esihle, uzoba nedekhi yohlobo lwe-Trex enetafula lepikiniki elakhelwe ngaphakathi kanye ne-grill yesizini yokosa inyama yantambama. Ngenhlanhla, igceke libuyela endaweni yemvelo engenamuntu enotshani bemvelo nezihlahla eziningi, okukwenza uzizwe ususwe kancane emisebenzini eseceleni kwe-resort ye-Wallowa Lake.
Ngaphakathi kwegumbi lokuphumula kunekhishi elifana negalaji elinendawo eyanele yokulungisa ukudla ngokunethezeka kanye nomunye umnyango ovulelwa ngemuva. Ebusuku, uzothola ukuthi igumbi lokulala linendawo yokugezela exhumene (nendawo yokugezela kuphela).
Leli khabethe elincane elimnandi liyindawo efanelekile yokubaleka kombhangqwana wakho, iholide lomndeni wakho omncane, noma ithuba lokubalekela konke!
Ayikho isevisi yekhebula, kodwa kukhona idivayisi yokusakaza-bukhoma/i-VCR/DVD player
Sicela uqaphele ukuthi ikhethini (esikhundleni somnyango) lihlukanisa igumbi lokulala negumbi lokuphumula; indlu yokugezela itholakala ngekamelo lokulala